Bestune Motor ၏ ထူးခြားကောင်းမွန်သော အစဥ်အလာ - Drive Myanmar
Drive Myanmar > News > News > Local Updates > Bestune Motor ၏ ထူးခြားကောင်းမွန်သော အစဥ်အလာ
Bestune သည် တရုတ်နိုင်ငံ ထိပ်တန်းကား ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သော FAW ကုမ္ပဏီက ထုတ်လုပ်သည့် ခေတ်မီဇိမ်ခံကားဖြစ်သည်၊၊ FAW သည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် VW, TOYOTA, GENERAL MOTORS စသည့် နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများနှင့်ဖက်စပ်၍ ကားမျိုးစုံထုတ်လုပ်ကာ နိုင်ငံတကာသို့ ဖြန့်ချိရောင်းချလျက်ရှိပါသည်၊၊
Bestune ကားများကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး မာဇဒါဆီဒင်ကားကို အခြေပြု၍ ထုတ်လုပ်ထားကာ Besturn ဟူသောအမည်ဖြင့် ဈေးကွက်ထဲသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်၊၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် Bestune ဟု အမည်ပြောင်းလဲ၍ ၄င်း၏ အမှတ်တံဆိပ် (Logo) ကိုလည်း လက်ရှိအသုံးပြုနေသောတံဆိပ်သို့ ပြောင်းလဲ အသုံးပြုခဲ့သည်၊၊
Bestune ကား၏ တံဆိပ် (Logo) သည် Window of the World – ကမ္ဘာကြီး၏ တံခါးပေါက် ဟူသော အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ဆောင်ပါသည်၊၊Best သည် အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးရန် ရည်ရွယ်ပြီး Tune သည် ငယ်ရွယ်နုပျိုမှု၊ အချိန်နှင့် ခေတ်မီဆန်းသစ်မှုတို့၏ စည်းချက်နှင့်အညီ လိုက်ပါစီးမျော၍ ပြောင်းလဲမည်ဟူသော အဓိပ္ပာယ်ကို ဆောင်ပါသည်၊၊ နိုင်ငံတကာတွင် ထိုးဖောက်အောင်မြင်လျက်ရှိသည့် Bestune သည် ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါသည်၊၊ Test Drive စမ်းသပ်မောင်းနှင်ရန်နှင့် ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန်အတွက် Bestune Showroom နှင့် အောက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်၊၊
Yangon Showroom >>> No.(186),Corner of Dhama Thukha Kaung Street and Yangon-Insein Road,Hlaing Township,Yangon,Myanmar. Ph-09-451337057
Mandalay Showroom >>>Mandalay-Pyinoolwin street,Between 41st x 42st,PaTheinGyi Township, Mandalay, Myanmar. Ph-09-5000066
Lotus သည် Elise , Exige နှင့် Evara တို့၏ ထုတ်လုပ်မှုများအားရပ်ဆိုင်းမည်။
အသစ်မိတ်ဆက်လိုက်သည့် New Bentley Bentayga Outdoor Pursuits Collection